Aqoonkaab 14 su'aalod oo muhima inaad waydiiso caruurtada kuwaso ka caawin donaa inay maskax ahaan koraan. | Aqoonkaab
14 su’aalod oo muhima inaad waydiiso caruurtada kuwaso ka caawin donaa inay maskax ahaan koraan.
Jun 18, 2015Arrimaha bulshada
Qoysaska somalida. caruurta iyo walidka waxaa ka dhexeeya xidhiidh aan wanaagsanayn mid qalafsan oo adag taso sabab noqoto Mustaqbalka caruurtu inuu xumaado.
Qoysku waa warshada waxsoosaar ee umada.waa waajib saaran waalindka inuu caruurtiisa udiyaariyo duni aad wayn iyo siday Uqabililahayeen nolosha
Waydii caruurtaada su’aalahan si aad ugu dhiirigaliso wada shekaysiga iyo inaad ka caawiso inay maskax ahaan caafimaad qabaan .qaar kamida su’aalahan waxay caawinayaa inu xogaysto xidhiidhka idinka dhaxeeya adiga iyo ubadkaaga .
1.maxay yihiin shanta weedhood ku qeexikarto naftaada?
Su’aashan waxay farta ugu fiiqaysaa caruurtaada jihada ay ku ogaan karaan nafahooda.waxay sinaysaa ubadkaaga
frame wanaagsan tixraac alku ka istaagi lahaa nolosha.
2.Maxad jeceshahy inaad qabato kaso farxad aad dareento qabashadiisa?
caruurta qaar kamida ahi waxay ku oranayaan markanu ciyaarayno Video game ka waxaanu darenaa farxad .tan oo aad u wanaagsan .cilmibaadhis cusub waxay sheegaysaa faadio aad ubadan oo dhanka caafimaadka inuu leeyahay ciyaarista gameka.
3.maxaad taqanaa sida loo qabto kaso aad barikarto dadka?
Su’aashani waxay ku saabsantahay inaad ubadkaaga barto in noloshu dhamanteed kugu saabsanayn adiga kaliya balse aad cilmiga iyo waxa aad taqaano ugudbiso walaaladaa .noloshu waa inaga iyo waxay nu ku caawino kuwa kale
Su’aashani waxay ka caawinaysaa ilmahaaga inuu dareemo awood iyo inuu leeyahay qiimo .waxay xasuusinaysaa inuuyahay wax gaara taso kalsoonida nafahooda kor uqaadaysa.
4.Ma iisheegi karta waxa ugu cajiibsan iyo ka ugu xun ee kugu dhacay intaad noolayd?
Noloshu mahaa dhamanteed iftiin iyo dhalaal.lkn waxay noqonaysaa mid isugu jirta mugdi murgooo iyo farxad.
Noloshu waa isku jirka khibrado wanaag iyo xumaan.taso ah waxa dunida micnaha usamaynaaya
ubadku waxay ubaahanyihiin inay fahman xaqiiqadan xili hore maskax ahaana udiyaarsanadaan nolosha .waxay ka caawinaysaa ilmahaaga inuu xaqiiqsado khibrado isaga u gaara.
5.Maxaad ka baratay wixii tagay iyo wixii ugu xumaaye kugu dhacay?
odhaag qadimiya ayaa oaranaysa.khibradu waa macalinka ugu wanaagsan.taso run ah .waa muhim inay sosaaraan khibrado iyaga ugaara xumaan iyo wanaagba ah iyo inay bartaan khibrada ha dadka ay ugu horeyaan waalidkood,
taso ah sida ugu wanaagsan loo sameeyo dadaal iyo sida loo sameeyo xaalada ugu wanaagsan .marku ilmahagu barto khibradihisii waxay la micno tahay .inaanay dhacayn inay ku celiyaan isla hal qalad mustaqbalka.
6.Dhamaan waxan aad baranayso .maxay tahay waxa aad isleedahay mustaqbalka waad ka isticmaali dontaa?
Su’aashani waxay ku saabsantahay inaad xasuusiso caruurtaada in maalin ay noqon donaan dad waawayn .una baahnan donaan inay bilabaan inay unoladaan ujeedo .
Markaad ilmahaaga fahmo qiimaha uleeyahay waxan ubaranayaa iyo siday u caawin doonto mustaqbalka .way dhiirigalinaysaa waxanu si dhaba ugu raaxausan donaa waxyaabaha sida akhriska iyo barashada cilmiga .
7.Hadaad dib ugu so noqoto 3sano jirkaagi,talo noceyaad siinlahyd naftaada.
su’aashani waxay ka dhigaysaa wadahadalka idiin dhexeeya mid xiisa leh taso kaa caawin doonta inaad barato waxyaabihii hore ee ilmahaaga dhaawacay
8.Maxaad aad ka mahadnaqdaa?
Su’aashani waxay ku dhiirigalinaysaa caruurtaada inay tiriyaan waxabaha wanaagsanay haystaan iyo inay ka egaan nolosha dhanka fiican.kadib waa inaad bartaa ubadkaaga ka mahadnaqaan waxay haytaan muhim maha intay leegtay sida qaraabada saaxibada shoolka iyo cuntada.
9.maxaad jeceshay inaad dunida ku so kordhiso mustaqbalka ?
su’aashani waxay muhim utahay in ubadkaaga barto inay dulsaarantahy
masuuliyad balaadhan .
iyo inay ka fakaraan mustaqbalka iyo qorshihiisa waxay ka caawinaysaa caruurtaada inay u fiirsadaan wuxu donaayo inu noqdo marku waynaado.
10.Maxay tahay xikmada ka danbaysa in dunidan lagu keenay?
Su’aashan waxay kaa caawinaysa inaad ogaato ilmahaago fikirkuu aduunka ka haysto iyo siduu ueegyahay.
ugu danbayntiina usheegto in loo keenay aduunka inuu allah caabudo
11.markaad waynaato hadaad noqoto caan maxaad jeclaan lahayd inaad ku caan baxdo.
su’aashani waxay toos u daloolinaysaa ilamaaga maskaxdiisa isago dareemaaya micnaha dhabta ah ee guusha iyo magaca uu dunida kaga tago .
guushu malacg la ururiyeybaa .mise waa wax intaa kabalaadhan .
12.Maxaad jeceshahay inay dadku kugu xasuustaan.
Su’aashan waxaad ku ogaanaysa raadku jecelyahay ilmahaagu inuu dunida kaga tago
13.saad ucaawin kartaa qof manta?
jawaabta ilamaahgu ku siyaa waxaad ku baranaysaa inuu jecelyahay inuu walaladiisa muslimka ah caawiyo iyo wuxu jecelyahay inuu ku caawiyo sidokale waxaan ku ogaanaysaa heerkisa naxariseed intay leegtahay.
14.hadaad samayso sharci kaso dadka dunido dhami racaan .sharci nocee samayn lahayd.?
ilamhaagu su’aashan wuxu ku oganayaa in dunida lagu dhaqmo shuruuc iyo qawaaniin .taso ay mamnuun tahay inad laga talaabo .
–Bilal Ahmed Egeh[DEEQ]
Previous PostGALAXY Note 5 oo yeelan doono USB-C Next Post5 tallaabo oo aad ku xoojin kartid kalsoonida naftaada